Biko Adala maka SEO Email SPAM | Martech Zone
Biko Adala maka SEO Email SPAM
Thursday, January 16, 2014 Wenezdee, Jenụwarị 15, 2014 Douglas Karr
Arụ ọrụ n'ime search ahịa ụlọ ọrụ, otu anya na email dị ka nke a na-eme ka m chọrọ puke. Mana anyị nwere ndị ahịa n’oge gara aga na-agwa anyị na ha natara arịrịọ sitere na ụlọ ọrụ SEO na-eme ka ha mara na ha anaghị ọkwa. Ha zigaara anyị ya jụọ maka gịnị?
Ka anyị mebie email a:
Site na Mark Peterson (maketopseorank@gmail.com). [Gmail? Ya mere, nwoke a anaghị arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ nwere ngalaba m nwere ike ịlele? maketopseorank? n'ezie?]
Nnọọ, [Ndewo onye? Maghị m, ka ị maara?]
Olile anya na odi nma. Dịka akụkụ nke nyocha ndị ahịa anyị [AKA - anyị zụtara ndepụta nke ndị nwe saịtị], anyị hụrụ gafee weebụsaịtị gị "Marketingtechblog.com" ma chọpụta na saịtị gị anaghị ogo na ngwa nyocha kachasị mkpa dị ka Google, Yahoo & Bing. [Ebee ka anyị anaghị agbago? Anyị na-akwado # 1 n'ọtụtụ narị okwu!] Anọ m na-eche ma ị ga - enwe mmasị na ọrụ njikarịcha search engine maka weebụsaịtị gị na ọnụ ala dị ala. [SEO dị ọnụ ala ga-eme ka a machibidoro gị… ọ na-eweta ọdachi maka ndị nwe saịtị.]
Ikike njikarịcha njin ọchụchọ ga-eme ka njirimara gị mara, ịzụ ahịa weebụ ma bulie ahịa gị, nke mere na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ iji bido ya? [Ee… na ihe kpatara na agaghị m etinye onwe m n'ihe ize ndụ ịme azụmahịa na onye na-amaghị m, amaghị saịtị m, amaghị ihe m ji arị elu, amaghị ihe m chọrọ ọkwa, ma ọ bụ maara ihe m na-ere n'ezie.]
Anyị nwere ike ịkwalite weebụsaịtị gị na ntinye peeji 1 na Google, Yahoo, ma ọ bụ Bing n'ime ọnwa atọ ruo ọnwa isii ejiri nkwa anyị "National SEO" mee ihe. [Nkwa? Ntinye peeji mbu? Enwere m ike ide isiokwu na ihe ọ bụla wee nweta ntinye ebe 1st ụfọdụ Okwu.] Ọnwa atọ ruo ọnwa isii bụ ihe atụ maka nchịkọta SEO anyị niile!
Mee ka m mara ma ọ bụrụ na i nwere mmasị, anyị ga-ezitere gị nkọwa ndị ọzọ, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịhazi oge ịkpọ oku. Ọ bụ nhọrọ gị. Anyị ga-achọ ịrụ ọrụ na gị!
Ana m atụ anya nzaghachi gị. [Akwa - Ana m ezitere gị njikọ nke post blọọgụ a.]
Onye Nzụlite Ọzụmaahịa
Hey Mark… wepu m na ndepụta gị ma kwụsị ịnwa ndị mmadụ iwe.
Tags: emailmaketopseorankAseo arịrịọ emailseo wayoseo spamspam
Nkwalite nke Mgbasa Ozi Ndị Amaala na Mobile
Jenụwarị 17, 2014 na 8:31 PM
Ọzọ dị ukwuu post Doug! Ọ bụ ihe ọmụma n'ezie .. Daalụ maka ịkekọrịta, enwere m nnukwu ọgụgụ…
Ihe ngosi Nathan Scheer
Nov 28, 2015 na 12:26 AM
Ndị ahịa ọ bụla m gabigarala zitere m ihe dị ka nke a. Ọ bụ ihe mgbu ịnwe ịgwa ndị ahịa oge niile ka ha leghaara ndị a anya n'emeghị ka m na-agbasi mbọ ike idobe ha dị ka ndị ahịa mgbe ụfọdụ site na ịgwa ha na ha bụkarị otu ụyọkọ spam hats pushing bọtịnụ. Enwere m obi ụtọ iziga ha na post dị ka nke a iji gosi ha, ọ bụghị naanị m na-ekwu ihe ndị a.
Nov 28, 2015 na 3:26 PM
Ọ bụ n'ezie ụlọ ọrụ jọgburu onwe ya, Nathan!